1991 मा, सोभियत संघ संकुचन। राज्य सुरक्षा समिति देश संग गायब भएको छ। तर, यो को स्मृति अझै जीवित छैन केवल पोस्ट-सोभियत अन्तरिक्ष मा छ, तर पनि टाढा परे।
विशेष सञ्चालनका असीमित संख्या, दुनिया मा राजनीतिक अवस्था को विकास मा एक गम्भीर प्रभाव थियो जो - को KGB को खातामा। हामी लोकगीत मार्फत संसारमा सबैभन्दा प्रभावकारी बुद्धि सेवाहरूको एक को सम्झनाहरु धेरै बाँचे छन्। उपाख्यानों, मिथक, नाम र अन्य साधारण nouns सयौं।
तुरुन्तै पछि क्रान्तिको को विजय को सोभियत संघ मा विशेष उद्देश्यका लागि नयाँ मान्छे सरकार शरीर सिर्जना गरियो। विधिवत को राज्य सुरक्षा समिति मात्र 1954 मा देखियो। यस समयमा, stalin मृत्यु पछि, त्यहाँ एकदम ठूलो मात्रा सुधार थिए। सुरक्षा एजेन्सीहरू पनि परिवर्तन भइरहेको छ। KGB, वास्तव मा, लामो अस्तित्व कि पहिले, बस अन्य नाम लगाउँथे। विभाग एकदम स्वायत्त थियो, र यसको नेताहरूले पार्टी को राजनीतिक प्रणालीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका। विशेष गरी तथाकथित देखि , ख्रुश्चेव गरेको "हिउं पग्लनु" जब पार्टी बिस्तारै सार्न पुरानो र थप र थप आदर्श टाढा प्रशाशनिक तन्त्र र nomenclature को दलदल मा wallow गर्न थाले।
युद्धपछिको अवधिमा, 1954 सम्म, सोभियत संघ मा मात्रा kontrshpionskaya कार्यक्रम जारी राखे। राज्य सुरक्षा समिति यसलाई मा प्रत्यक्ष भाग लिए। यो जासुसहरूलाई, जासुसहरूलाई, informants र यति मा एक ठूलो रकम थियो। तर, ख्रुश्चेव सुधार समयमा एकदम कर्मियों छोटो थियो। यो रूस मा प्रकाशित कागजातहरू देखि ज्ञात भयो रूपमा, मान्छे को लगभग आधा कटौती गरेको छ।
को KGB को वर्गीकरणका
सोभियत गोप्य सेवा कर्मचारी मान्छे को सुरक्षा खतरामा सक्छ जो देश र विदेश मा सबै प्रक्रियाहरु, नियन्त्रण। मास्को मा, वहाँ एक केन्द्रीय नियन्त्रण छ। पनि प्रत्येक देशमा आफ्नो केन्द्रीय समितिको थियो। क्षेत्र - त्यसैले, मास्को को क्रम 14 थियो, र त्यसपछि जो रिपब्लिकन प्रशासन, मा दोहोऱ्याउनुभयो। प्रत्येक शहर मा, स्वतन्त्रता को क्षेत्र पनि विभाग थिए। सुरक्षा अधिकारीहरु, तिनीहरूले विशेष महत्त्वपूर्ण वा उच्च-प्रोफाइल अपराधको, प्रतिरोधक, फेला जासुसहरूलाई, राजनीतिक dissidents को छानबिन मा शामिल अधिकारीहरु को मानिसहरूले भनिन्छ थिए। यस शाखा लागि जिम्मेवार छ। त्यहाँ अरु पनि थिए।
राज्य cordon सुरक्षित र संभावित खतरनाक व्यक्ति को प्रवेश र अविश्वसनीय तत्व को प्रस्थान रोक्न भनेर सीमा सुरक्षा को यो विभाग। प्रतिरोधक प्रभाग, विरोधी-स्पाइवेयर गतिविधिमा संलग्न थियो। विदेशी खुफिया विभाग। उहाँले विशेष अपरेसन विदेश सहित शक्ति प्रबन्ध मिलाए। अझै पनि विदेश ideological मुद्दाहरू संग र सोभियत संघ मा गर्नुहुन्छ कि विभाग अस्तित्व। राज्य सुरक्षा समिति यस क्षेत्रमा विशेष ध्यान छ। कर्मचारी सिधै कलात्मक गतिविधि उत्पादनहरु को नियन्त्रण र निर्माणमा संलग्न। एजेन्ट विदेशी कामदारहरूलाई ती बढुवा कम्युनिस्ट आदर्श गर्न सांस्कृतिक कुराहरूलाई recruited।
ज्ञात गुप्त सञ्चालन
को KGB सबैभन्दा प्रसिद्ध सञ्चालनको एक 1945 मा गरियो। सोभियत संघ युद्धको devastation पछि पुनर्निर्माण। प्रारम्भिक फरवरी मा, क्रिमीआ एक बच्चाको मनोरञ्जन खोलेको छ "Artek" शिविरमा। अमेरिकी र ब्रिटिश राजदूतको को महान् खोल्ने समारोह मा आमन्त्रित थिए। को अग्रगामी को उत्सव को अन्त मा मूल सैन्य सम्बन्ध एउटा आदर रूपमा अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रिय गान गाए। अर्को Harriman हतियार को काठ हस्तनिर्मित कोट हस्तान्तरण खुश। सोझो राजदूत आफ्नो डेस्क माथि यो हङ। हतियार को कोट उपलब्ध समय अद्वितीय बग "Chrysostom" मा थियो। उहाँले शक्ति आपूर्ति बिना स्वतन्त्र काम गर्न सकेन। उहाँले बुद्धि रूपमा 8 वर्ष धेरै सेवाहरू राजदूत कार्यालय सुन्न दिनुभयो। एक सुन्न उपकरणको आविष्कार पछि, अमेरिका प्रतिलिपि गर्न प्रयास गर्नुभयो, तर कुनै लाभ गर्न।
मन्त्रीहरु को सोभियत संघ परिषद को राज्य सुरक्षा समिति अक्सर विभिन्न सैन्य सञ्चालन संलग्न छ। पहिलो एक "सञ्चालन Whirlwind" थियो। 1956 मा, एक विद्रोह सोभियत संघ वफादार छ जो शासन पार्टी बिरुद्ध हंगेरी मा सुरु भयो। राज्य सुरक्षा समिति त्यसपछि विद्रोही नेताहरू निर्मूल गर्न एक योजना।
नोभेम्बर को अन्त मा बुडापेस्ट रक्तपातपूर्ण लडाई को राष्ट्रवादी प्रति-क्रान्तिको (धेरै जो द्वितीय विश्व युद्ध को समयमा तेस्रो रैह द्वारा समर्थित) एक हात मा को समर्थकहरूको र हंगेरी सुरक्षा सेवाहरू बीच सोभियत सेना मिलेर गरिएका - अन्य मा। Imre Nagy - को सोभियत संघ राज्य सुरक्षा समिति तिनीहरूलाई भाग लिएनन् तथापि, विद्रोही नेताहरूको एक कब्जा गर्न योजना छ। उहाँले कपटपूर्वक लालच र उहाँले पक्राउ जहाँ रोमानियाली पक्ष, हस्तान्तरण गरिएको थियो जहाँ यूगोस्लाव दूतावास, मा लुकाउने थियो।
प्राप्त अमूल्य अनुभव, चेकोस्लोवाकिया, जहाँ प्रति-क्रान्तिकारी विद्रोह पनि चेकोस्लोवाकिया मा कम्युनिस्ट शासन को नसक्नुको दृश्यमा सोभियत सेना को सहायता संग दबाउन थियो मा एक समान सञ्चालन निम्न KGB मदत आफैलाई गर्छन्।
को सोभियत संघ राज्य सुरक्षा समिति 1954 मा स्थापित र 1991 सम्म चलेको थियो। सबैभन्दा सफल बुद्धि एजेन्सीहरू एक को स्मृति संसारमा यो दिनको रह्यो।
राजा गधा सुन्न के जारी? जवाफ प्राचीन ग्रीस को मिथक र दन्त्यकथा पाइन्छ
मारिया ह्यामिल्टन जीवनी, प्रेम र जीवनको कथा
सर्वोच्च Privy परिषद: सिर्जना र सहभागी वर्ष
के रूसी-पोलिस युद्ध नेतृत्व छ
इवान Ilyin - दार्शनिक, वकील र publicist
बोडरम होटल - सक्रिय आराम र रमाइलो गर्ने अवसर प्राप्त
Larisa Blazhko - अभिनेत्री, व्यापारी महिला र सीईओ को दान कोष को
Ayia नापा साइप्रस
पोलो मानिसहरू - कहिल्यै वृद्ध क्लासिक
Omsk मा सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्ट: वर्णन, फोटोहरू, समीक्षाहरू
"Gaviscon अग्रिम": निर्देशन, साइड इफेक्ट, औषधिको खुराक र प्रशासन को विधि
'शुभ gras' सलाद र गाजर कलेजो
Insurgent - यो छ? मा साहित्य र सिनेमा insurgent अवधारणा र Divergent
एक जफती के हो? अर्थ र परिभाषा
कसरी "स्काइप मा" माइक्रोफोन कन्फिगर गर्न - केही सरल कदम